Jim Pattison Broadcasting Group သည်ပလက်ဖောင်းအားလုံးနှင့်စျေးကွက်များတစ်လျှောက် Matrix ၏မီဒီယာကြော်ငြာအရောင်းပလက်ဖောင်းကိုအကောင်အထည်ဖော် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဆိုပါဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့်အုပ်စုအကောင်အထည်ဖော်မှု Matrix ရဲ့မီဒီယာကြော်ငြာအရောင်းအားလုံးပလက်ဖောင်းတစ်ဝှမ်းပလက်ဖောင်းများနှင့်စျေးကွက်များ
matrixမီဒီယာအဘို့တည်, တစ်ခုတည်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြော်ငြာရောင်းအားပလက်ဖောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် အဆိုပါဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့်အုပ်စု သူတို့ရဲ့အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မယ် ဧကရာဇ်မီဒီယာကြော်ငြာရောင်းအားပလက်ဖောင်း အားလုံးရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယို, အွန်လိုင်းဂုဏ်သတ္တိများ, သူတို့ရဲ့စျေးကွက်အားလုံးတစ်လျှောက်လုံးကိုဖြတ်ပြီး။ အချိန်နှင့်ငွေကိုနှစ်ဦးစလုံးချွေတာ - ပလက်ဖောင်းများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ကျယ်ပြန့်မွေးစားတစ်ပြိုင်နက်သူတို့လုပ်ငန်းအသွားအလာတလျှောက်လုံးဖြစ်စဉ်များအလိုအလျောက်နိုင်စွမ်းပေးနေချိန်မှာအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးဘက်စုံအမြင်ဘို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုကနေဒါထုတ်လွှင့်သူတို့၏အဖွဲ့များကိုဖြတ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ချိတ်ဆက်င့်လင်းမြင်သာကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့်အုပ်စု, ဖော်ထုတ်ရန်ကိုခြေရာခံများနှင့်စီမံခန့်ခွဲသစ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလားအလာအဖြစ်ဖောက်သည်အချက်အလက်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုသူတို့ကို enable မယ်လို့အဖြေတစ်ခုရှာခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း-Up နှင့် Cross-ရောင်းအခွင့်အလမ်းများအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်သူတို့ကိုအာဏာအပ်နှင်းကြောင်းအဖြေတစ်ခုချမှတ်ပါဝင်သည်။ Pattison ခြင်းဖြင့်ဆည်းကပ်သည့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပေမယ့်၎င်း၏မီဒီယာ-တိကျတဲ့သဘောသဘာဝနှင့်အတူ, သူတို့ကအကောင်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုဆက်လက်တည်ရှိဖို့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာအသုံးချဖို့နေကြသည်သေချာစေရန်ခြုံငုံထိရောက်စွာနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်သို့တိုးတက်လာဖို့ကသူတို့ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်မသာဧကရာဇ်။
"Matrix ကျွန်တော်တစ်ဦးရှေ့ကို-စဉ်းစားတွေးခေါ်အဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးအခြား CRM options များအကြားထွက်မတ်တပ်ရပ်, ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်-based မလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အရောင်းတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ရလဒ်တွေကိုတိုးတက်အောင်တစ်ဦးသက်သေပြချက်တွင် track record ရှိကြောင်း tool ကို" လှံတံ Schween, သမ္မတ, ဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့်အုပ်စုကဆိုသည် ။ "ဧကရာဇ်ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးအတှကျအလွန်ကြိုဆိုနှင့်မဟာဗျူဟာ tool ကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ "
အဆိုပါဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့်အဖွဲ့များ '' စစ်ဆင်ရေးအတွင်းဗဟိုအချက်အချာအဖြစ်အမှုဆောင်ခြင်း, ဧကရာဇ်အဆိုပါလုပ်ငန်းအသွားအလာတလျှောက်လုံး, ပထမနှင့် Third-party ဒေတာအပါအဝင်လူထုကိုဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုစုစည်းအမြင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒေတာစုစည်းမှုနှင့်ပုံမှန်စွမ်းရည်နှင့်အတူ coupled မျိုးစုံပေါင်းစပ်အချက်များ, အသုံးချဖို့, ဧကရာဇ်နောက်ထပ်စမတ်နှင့်ပိုမြန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်များစေခြင်းငှါသူတို့အားဖွင့်, သူတို့ရဲ့ဒေတာသို့တိုးမြှင် Real-time မြင်ကွင်းနှင့်အတူဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့် Group မှပေးလိမ့်မယ်။
shared "အရောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ထုတ်နှင့်နေ့ရက်ကိုတဦးတည်းအနေဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို automation, ကျွန်ုပ်တို့၏မီဒီယာကြော်ငြာရောင်းအားပလက်ဖောင်းနည်းပညာညာဘက်တံခါးဝမှထှကျအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောရွယ်ကယ်တင်နဲ့ကျွန်မအဆိုပါဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့် Group မှမြေပြင်ပြေးဝင်တိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်ယုံကြည်မိပါတယ်" မာကု Gorman, CEO ဖြစ်သူ Matrix ။ "ထိုအခါသင်တန်း၏, အဲဒီမှာကိုရပ်တန့်မထားဘူး။ ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူသစ်ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ် features တွေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမိတ်ဆက်ကြသည်သောကြောင့်ထုတ်ကုန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်ကြသည် - ။ ကျွန်တော်အပေါင်းတို့အဘို့အလွန်ချောမွေ့စွာလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဘယ်အရာအတွက်အားလုံးအသုံးပြုသူများအဖို့သူတို့ကိုထွက်လှိမ့်ပါလိမ့်မယ် "
Matrix, အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက matrixformedia.com.
ဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့်အုပ်စုအကြောင်း
အဆိုပါ Kamloops အတွက်၎င်း၏ဦးခေါင်းရုံးနှင့်အတူဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့်အုပ်စု, ဘီစီလက်ရှိဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ, အယ်လ်ဘာတာ, ဆက်စ်ခက်ချဝမ်နှင့်နီတိုဘာအတွက် 47 ရေဒီယို station,3သမားရိုးကျရုပ်မြင်သံကြားဘူတာနှင့် 17 အွန်လိုင်းသတင်း portal operating, နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကအနောက်ပိုင်း-based ထုတ်လွှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆိုပါဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့် Group သည်ဂျင်မ် Pattison Group မှ, ကနေဒါအတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကပိုင်-ကျင်းပကုမ္ပဏီဖြစ်လာမှစိုက်ပျိုးခဲ့သောဗန်ကူးဗားအခြေစိုက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုမိုစုံလင်အုပ်စု၏မာနထောင်လွှားဌာနခွဲဖြစ်ပါသည်။ သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.jpbroadcast.com နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
matrix မီဒီယာထိရောက်စွာဖွင့်နှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများ, content တွေကိုဖန်တီးဖျော်ဖြေနှင့်အကြောင်းကြားနိုင်အောင်ဝင်ငွေလှန်ဖို့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်စေသည်။ သူ့ရဲ့ flagship ထုတ်ကုန်, ဧကရာဇ်, မီဒီယာများအတွက်တည်ဆောက်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြော်ငြာရောင်းအားပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် - အလားအလာများအတွက်လိုအပ်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုကယ်တင်တတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်ရောင်းအားသတင်းအချက်အလက်သို့ဖရိုဖရဲ data တွေကိုပြောင်းလဲစီမံခန့်ခွဲခြင်း, စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ 13 မီဒီယာရောင်းသူထက်ပိုရန်၎င်း၏အကောင်းဆုံး-In-class ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အရောင်းထောက်လှမ်းရေး, မီဒီယာ-တိကျတဲ့ CRM နဲ့အရောင်း tools တွေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, မီဒီယာကြော်ငြာဝင်ငွေထက်ပို $ 10,000 ဘီလီယံအထိစီမံခန့်ခွဲ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.matrixformedia.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု မာကု Gorman matrix ကိုဖြေရှင်းချက် ဧကရာဇ်ကြော်ငြာအရောင်းပလက်ဖောင်း အဆိုပါဂျင်မ် Pattison အသံလွှင့်အုပ်စု တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-07-18
ယခင်: Magewell က Ultra Stream ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာမိသားစုအတွက်အစွမ်းထက်နယူးအင်္ဂါရပ်များ Unwraps နှင့် New မော်ဒယ်
နောက်တစ်ခု: ထိပ်တန်းပိုလန်အားကစားထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ရေးအတွက်စတူဒီယို Technologies က '' မော်ဒယ် 5412 ပေး Audio Interface